Waa maxay ESRI oo raadineysa ruqsadaha cusub? - Geofumadas
Sida ku xusan warbixinta ESRI, bilawga sanadka soo socda, waxay bedeli doontaa foomka ruqsadda adigoo adeegsanaya jeebka (adeega garaaca ama dhaqdhaqaaqa furaha ah ee ku xiran processor).
In kasta oo ESRI ay hubiso inay sidaas sameyso si loo wanaajiyo dhibaatada ay sababaan xaqiiqda ah in aqrinta ay sameyso xudunta markii adeegga la shaqeynayo waxaa saameyn ku leh rakibidda codsiyada kale iyo kala duwanaanta heerarka barnaamijyada kombiyuutarka iyo qalabka soo afjaraya abuurka isku dhaca. Socket ama baahida loo qabo in la hirgaliyo shati farsameeyahaba.
Maxaa ESRI ka raadin karan go'aankan?
1. Burcad-badeednimada yareeyaa
Asal ahaan waxaan u maleyneynaa inuu yahay mid ka mid ah ujeedooyinka ESRI, muddo dheer oo u baahan nidaam taas oo ay adagtahay in la jebiyo, oo la mid ah kuwa ay isticmaalaan goobaha kale ee muhiimka ah ee aasaasida dhaqdhaqaaqa isku xira nidaamka hawlgalka iyo xogta kooxda iyo ku tiirsanaanta joogtada ah ee isku xirnaanta webka. Inkastoo ay jiraan kuwa shufto ruqsadaha kale waa adag tahay in la kulmin si kastaba ha ahaatee waxa ay u muuqataa in ujeedka of liisan ilaalin doona codsiyada server dheeraad ah, macmiilka oo aan aad u badan si ay gool tani ma aha sida waafaqsan.
2. Si aad u hesho liisamada hore ee suuqa
Tani waa baahi degdeg ah oo loogu talagalay ESRI iyo goobaha kale, maaddaama kharashyadooda taageeraya ArcView 3x waa inay ka sarreysaa iibka lagu gaaro arjigaan. AutoDesk ayaa ku guuleysatey in ay si tartiib tartiib ah u yareeyso noocyada dhibaatooyinka iyada oo la tixgelinayo Ka saar taageerada ilaa AutoCAD R14, ka dibna AutoCAD 2000; Go'aanno leh raad-reebitaanno xun oo ballaadhan laakiin leh weedha ah «habka kaliya ee lagu garaaco burcad-badeednimada waa inay noqotaa mid hal-abuureed, mar labaad, daqiiqad kasta, sannad kasta, nooc kasta«… In kasta oo ay tani tusinayso tixgelinta qoraalkii hore. Iyo maadaama shatiyadaha ka dhex shaqeeya adeeggu ay ka socdaan 8x, waxay u muuqataa in ujeeddadan aysan mudnaanta koowaad u lahayn ESRI.
3. Hagaajinta caddaalad darida ruqsada
Rumayso ama ha rumaysan, waxyaabaha qaar ayaa noqon doona kuwo raaxo badan (waa la malaynayaa), sida adeegsiga shatiyada ArcGIS Server, oo hadda ku shaqeeya $ 35,000 "processor" kasta, markaad wax ka qabaneyso laysan aan ahayn boorsada, waad filan kartaa in gelinta processor dheeri ah kumbuyuutarrada aysan u baahneyn $ 35,000 kale, maxaa yeelay waxay taageeri doontaa ilaa xirmooyinka 4 gudaha isla jooniska ... Waan shaki qabaa.
Sidaas waxa ESRI u muuqata inay raadinayso ugu dambeyntii inay la tartanto badeecadeeda (taas oo ah aad qaali u ah) inkastoo aan aqoonsano mudnaanta iyo taageerada hay'adaha.
ESRI waxay xaqiijineysaa in tani aysan saameyn ku yeelan doonin kharashyada, shirkadahaas ama kuwa isticmaala kuwaas oo ku daray taageerada qandaraasyadooda ruqsadaha ... taasi waa waxa laga filayo dalka.
Halkan waxaa ku qoran liistada sida kumbuyuutarka ArcGIS iyo ARCIms kiisaska shatiga u shaqeynayaan
Tirada hadda jirta Sharaxa shatiga Qaddarka la soo jeediyay Sharaxaadda liisanka
1 ArcGIS Server Advanced Enterprise 2 rakibaadyada ilaa xuunta 2 meel kasta 1 ArcGIS Server Advanced Enterprise ilaa xudunta 4
1 ArcGIS Server Standards 2 rakibaadyada ku xiran 2 dhejis kasta 1 ArcGIS Server Standard Soodhaweynta ilaa xarfaha 4
1 ArcGIS Server Qalabyada aasaasiga ah ee 2 illaa xudunta 2 halkii sock 1 ArcGIS Server Enterprise aasaasiga ah ilaa xarfaha 4
1 ArcGIS Server Advanced Enterprise Bacaha dheeraadka ah ilaa xuunta 2 halkii sock 2 ArcGIS Server Sare Ganacsi Dheeraad ah
1 ArcGIS Standard Standards Enterprise Bacaha dheeraadka ah ilaa xuddurrada 2 meel kasta 2 Istaandar Macmiilka ArcGIS Macmiilka Dheeraadka ah
1 ArcGIS Server Basic Enterprise Shirkadda dheeraadka ah ee loo yaqaan '2 cores' per outlet 2 Macmiilka ArcGIS Server aasaasiga ah
1 ArcGIS Server Advanced Enterprise 2 rakibaadyada ilaa xuunta 4 meel kasta 1 ArcGIS Server Advanced Enterprise ilaa xudunta 4
4 ArcGIS Server Soodejin Macluumaad Dheeraad ah
1 ArcGIS Server Advanced Enterprise Bacaha dheeraadka ah ilaa xuunta 4 halkii sock 4 ArcGIS Server Soodejin Macluumaad dheeraad ah
1 ArcGIS Server Advanced Workgroup 1 waxay ku xiran tahay xarigaha 2 meel kasta 2 ArcGIS Server Tababarka Hoggaanka sare ee 1
1 ArcGIS Server Advanced Workgroup 2 waxay ku xiran tahay xarigaha 2 meel kasta 4 ArcGIS Server Tababarka Hoggaanka sare ee 1
1 ArcIMS 1 waxay ku xiran tahay xarigaha 2 meel kasta 2 ArcIMS 1 xudunta
Hase ahaatee, boostada ayaa noqotey mid ka badan kooras, adiga oo aaminsan?
Post Previous«Previous Geofumadas duulimaadkii December 2007
Post Next Laga soo bilaabo Kml ilaa GeodatabaseNext »